राजनैतिक अस्थिरताका कारण पुँजी पलायन : पूर्व अर्थमन्त्री महत
added on Feb 11
२६ माघ, लमजुङ ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले देशको राजनैतिक अस्थिरता कै कारणले पुँजी पालयन भएको बताएका छन् । राजनैतिक दलहरुले आर्थिक सम्बृद्धिको कुरा गरेतापनि त्यो ब्यवहारमा ल्याउन नसक्नु दुखद पक्ष भएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल प्रेस युनियन लमजुङ शाखाले बुधबार बेसीशहरमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै डा. महतले भने, ‘मुलुकमा लगानीको बातावरण बन्न सकिरहेको छैन्, विदेशी उद्योगी व्यवासायीले नेपालमा लगानी गर्न चाहदा चाहदै पनि नगरिरहेको अवस्था छ ।’
मुलुकमा लगानी गर्ने बातावरण बनाएर र पुँजी प्रवद्र्धन गर्ने नीति बनाउन सके नेपालमा अरबौ लगानी भित्राउन सक्ने नेता महतले दाबी थियोे । लगानीका लागि सरकारको अस्थिर नीति नै मुख्य बाधक भएको नेता महतको भनाई छ । ठुला बडा र पहुचवालाले जति सुकै भं्रष्टाचार गरे पनि सजाय भोग्नु नपर्ने तर पहुच नभएका व्यतिmले सानो गल्ती गर्ने बित्तिकै सजायको भागिदार हुने प्रवृति गलत भएको उनले बताए । पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले वित्तीय पारदर्शीतामा देखिएको चुनौतिको सामना गर्दै सरकारी सम्पत्तिको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी बनाउन, चुहावट नियन्त्रण र सरकारको खर्चलाई पारदर्शी बनाउन लागेमा मात्र वित्तिय प्रगति हासिल गर्न सकिने उनको धारणा थियो ।
उनले वित्तीय व्यवस्थापनलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान पद्दत्तिको परिमार्जन र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।